Daawo Sawirada:- Maxaa kala heesta Dumarka ka xoogsada Magaalada Muqdisho iyo Bajaajta?! - iftineducation.com
Daawo Sawirada:- Maxaa kala heesta Dumarka ka xoogsada Magaalada Muqdisho iyo Bajaajta?!
aadan21 / January 17, 2015
iftineducation.com – Dumarka Soomaaliya burburkii kadib, waxay dusha u riteen inay Qoyskooda ka samatabixiyaan Gaajada, maadama ay waayeen Mas`uuliyadii Ragga laga rabey. Taasi oo sabab u noqatey dagaaladii Dalka & Dadkaba aafeyey waxaana lagu waayey Aabe badan oo ka tagay Agoon, kuwana naafa noqdey halka kuwa kalena waxyeelooyin maskaxeed ka soo gaarey dagaaladii taasina sabab u noqotay shaqo la`aan. sidaa awgeeda waxa lama huraan noqatey inay Dumarka ay guntiga u xirteen siday ugu heli lahaayeen Masaarifta Qoyskooda waxa u sii dheer Barbaarinta Caruurta.
Haweenka intii xirfadaha fiican lahaa ka sokow inta kale waxay u bareereen in ay xoogooda ugu shaqeeyaan caruurtooda, qoyskana u baahi tiraan nolol iyo waxbarasho intaba. Haweenka shaqooyinka ay u kaceen waxa ka mid iibinta Qaadka, Shaaha, Dhar Dhaqista, Jaarinimada iyo Xamaaliga. maadama Shaqooyinkaasi oo dhan ay yihiin kuwa dhib badan kala kulmaan waxayna Door weyn kaga qeyb qaataan baahida Bulshada iyo tii maareynta nolol maalmeedkooda.
Hablaha ku nool magaalada Muqdisho kana xoogsada Suuqyada waa weyn ayaa saamayn badan ku yeelatay Baajaajta (Tuk-Tuk) ku soo badatay Magaalada, ayagoo ku waayey shaqadii Xamaalnimada oo dushooda ku qaadi jireen raashiinka, Bagaashka, Macuunta & dhamaan waxyaabaha ay qaadi karaan waxayna ku qaadayeen Dambiil weyn oo loo yaqana Maroogsin ayagoo ku geynayaan Xaafadaha dhow dhow iyo Isgosyada Baaburta laga raro iyadoo shaqadaas ay kulmaan Qatar badan sida Dhabar xanuun, Dhiig bax & Xiliga uurka taasoo marka dambe ay u dhul Dhacaan .
Ganacsatada Bajaajta keeney waxay shaqo u abuurtey dhaliyaro badan oo shaqo la aan haysay, waxayna faaiido u noqotay dadka ka ganacsada Shidaalka iyo Bulshada oo qiimo jaban ku raacaan halka baabuurta Tagaasida ay qaali tahay. Soomaali waxay ku maahmaahda (Faa’iida kastoo jirta qofbay Khasaaro u tahay!).
Dumarkani waxay kaloo cabasho ka sheegteen in Guryihii dharka ay u dhaqayeenna ka dib markii dadka qaar ay keensadeen Qasaalado sababtey in ay waayeen Dhaqaalihii yaraa ee ay heleyeen iyadoo tii Jaarinamadana ay ku adkaatey sugitaanka Kharashkii ay heli jireen bisha taasoo la ogyahay in aysan ku filneyn waxayna doorbideen inay maalintii xoogagooda qaatan ,waxaana Xaafadaha dhexdooda aad ka maqaleysaa “Yaa Dhar loo dhaqayaa “.
Dhibaatooyinkan iyo kuwa ka badan waxa keenay inaysan haysanin Waxbarasho xirfadaysan, madaama Haweenkii hore xirfado badan ku xaamalan jireen sida: Falkinta Saliga iyo Dermaha, Babisyada, Dambiilaha, Xarqaanka iyo farsamooyin kale aad u badan taasina keentay ayagoo Dumarka haysteen Daryeel dhan kasta leh. Aqoon la aantani ayey hooyo badan Qatar u gashay.
RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAAL
sidoo kale Tiknoloojiyada Casriga eek u soo kororey Dunida waxay shaqo la’aan dhigeen Malaayiin Ruux oo Dunida ku nool oo u badan marka waxaan leeyahay Dumarka Soomaaliyeed kaligiin Dhibaatada idiin ma haysato waa in aad Samartaan oo Dadaalkiina aad sii wadaan ee aad ugu adeegeysaan Bulshadiina.
Haweenka oo ah kuwo ugu nugul dhibaatooyinka kala duwan ee dalka ka jira waa in loo furaa meelo lagu barro Xirfado laguna wacyi galiyo inay wax bartaan taasina ka kaafin doonta waxay tabanayaan. Mas`uulayadaasina waxa ay saaran tahay bulshada oo muhim tahay in la iska kaashado. Waxana idin leeyaha Soomaliyeey Wadajir ayaa baahida looga baxaa ee Walaalkaaga intuu Gaajaysan yahay keliga ha dhergin!
Banaanbax looga soo horjeedo Wargeyska Charlie Hebdo oo maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho
10 Qaab Oo Aad Isaga Difaacayi Karto Shucaaca Computerka Ee Halista Ku Ah Caafimaadka Indhahaaga